Iindaba-Uyisombulula njani ingxaki malunga nokuhanjiswa kwamandla?
Ukunikezelwa kwamandla kuneparameter: ukulinganiswa kwe-IP, oko kukuthi, ukungabi nothuli kunye nokulinganisa okungangeni manzi. Sebenzisa i-IP ngamanani amabini ukubonisa, inani lokuqala libonisa inqanaba lokukhuseleka kwesimo esiqinileyo, kunye nenombolo yesibini
Ibonisa inqanaba lokhuselo lolwelo lwezixhobo. Ngokwenombolo ezahlukeneyo zeqokobhe lemveliso, amandla okukhusela imveliso anokugqitywa ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
Ewe kunjalo, unikezelo lwamandla lukwanesekethe ezifutshane, ukulayisha ngaphezulu, kunye neeparameter zokhuselo lobushushu obungaphezulu. Eli nqaku alidingi kuchazwa kakhulu, yintsingiselo oyiqondayo.
Q: Ngawaphi amanyathelo othintelo ekukhetheni i-LED yokuhambisa umbane ongenamanzi?
A. Ukonyusa ubomi benkonzo yesixhobo esingaguquki samandla ombane wamandla ombane, kuyacetyiswa ukuba ukhethe imodeli ene-20% ngaphezulu yokukhutshelwa kwamandla. Umzekelo, ukuba umthwalo uyi-120W, kuyacetyiswa ukuba ukhethe ifayile ye- Ukunikezelwa kwamandla okuhamba kwamanzi okungena kumbane angama-150W, njalo njalo ngempumelelo ukuphucula ubomi unikezelo lwamandla manzi.
B. Kuyimfuneko ukuba kuthathelwe ingqalelo ubushushu bendawo yokusebenza kombane ongangeni manzi nokuba ngaba kukho ezinye izixhobo zokuhambisa ubushushu ezincedisayo. Umthwalo ulingana nokwanda xa ubushushu bemo ephezulu kakhulu, ngoko ke umbane ongangeni manzi kufuneka uncitshiswe
C, ukusetyenziswa kombane wesitrato kunye nokuhanjiswa kwamandla okuqhelekileyo kufuneka bakhethe ukuhambelana kombane.
D, khetha isatifikethi semveliso esifunekayo kunye neeparameter zomsebenzi, iinkcukacha, ezinje nge-CE / PFC / EMC / ROHS / CCC, njl.
Umbuzo: Kutheni unikezelo lwamandla okungangeni manzi lusilela ukuvula ngaphandle kwezixhobo xa umthwalo uyimoto, ibhalbhu okanye umthwalo we-capacitive?
Xa umthwalo uyimoto, ibhalbhu yokukhanyisa okanye umthwalo we-capacitive, okwangoku kukhulu kakhulu ngexesha lokuvula, elidlula umthwalo omkhulu kunikezelo lwamandla angangeni manzi, ke umbane ongenawo amanzi awuyi kuba nakho ukujika kakuhle.